पर्समा यी चिज राख्नुहोस् पैसाको अभाव कहिल्यै हुँदैनपर्समा यी चिज राख्न
Home बिचार पर्समा यी चिज राख्नुहोस् पैसाको अभाव कहिल्यै हुँदैन
भनिन्छ नि धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र खुल्छन् । यसको अर्थ धनको महत्व व्यापक छ । अहिलेको युग वैश्य युग भएकोले मानिस सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन चाहन्छन् । अहिलेको दुनीयामा भौतिक सुख सुविधाको लागि धनको अपरिहार्य भइसकेको छ । मानिसहरु अहिले धन कमाउनकै लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । तर धन कमाउन चाहँदैमा धन कमाइने भने होइन । धन त्यसै प्राप्त हुने चिज पनि होइन । कसैलाई धनको अभाव जिन्दगीभर रहँदैन भने कोही सधै जीन्दगीभर धनको अभावमा बाँचेका हुन्छन् । त्यो अवस्था हाम्रा परिश्रम मेहनेत र आनीबानी र संस्कारमा पनि भर पर्दछ । धनकी देवी भनेर लक्ष्मीलाई चिनिन्छ । लक्ष्मीलाई खुसी बनाउदा पनि धन प्राप्ती हुने विश्वास गरिन्छ । पर्समा हामीले पैसा राखिन्छ ।
यहाँ वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा राख्नु पर्ने ७ कुराको चर्चा गरिएको छ । यी कुरा पर्समा राख्दा पैसाको अभाव हुँदैनः
१. हरेक कुरा पर्समा राख्ने बानी छ भने यस्तो नगर्नुस् । पर्समा अनावश्यक चिजहरु गोलमाल गराए राख्दा यसले नकारात्मक उर्जा पैदा हुन्छ र आर्थिक अभाव हुन सक्छ ।
२.यदि तपाइँको पर्समा लक्ष्मीको तस्विर छ भने यसले पनि सकारात्मक उर्जा पैदा गर्छ । यसले पैसाको अभाव हुन नदिने वास्तु शास्त्रको विश्वास छ ।
३.पर्समा लक्ष्मीलाई चढाइएको वा पुजामा प्रयोग गरिएको चामलका दाना राख्दा पनि सकारात्मक उर्जा बन्ने वास्तु शास्त्रको विश्वास छ । यस्तो चामललाई कागजमा पोको पारेर पर्समा राख्नु उचित हुने मानिन्छ ।
४.मानिसहरुले कसै न कसैलाई गुरु मान्छन् । कतिपयलाई कुनै तर्थस्थलप्रति श्रद्धा हुन्छ । पर्समा गुरुको तस्विर हुनु वा अध्यात्मिक क्षेत्रको तस्विर हुनु सकारात्मक मानिन्छ । यसले तपाइँलाई आर्थिक अभाव हुन नदिने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ ।
५.पर्समा लक्ष्मीको प्रतिमा, गोमती चक्र, चाँदिको सिक्का राख्नु पनि शुभ मानिन्छ । यस्ता वस्तुले पर्समा सकारात्मक उर्जा पैदा गर्ने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ ।
६. पर्समा अश्लिल तस्विर वा अश्लिल सामग्री नराख्नुस् । यस्ता कुराले नकारात्क उर्जा बढाउँछ । सके सम्म देवी देवताका तस्विर राख्नुस् ।
७.पैसाकी देवी लक्ष्मी हुन् । लक्ष्मीको कृपा भएमा पैसा हुने विश्वास गरिन्छ । यसका लागि पर्समा श्रीयन्त्र राख्नु राम्रो हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । विधी पुर्वक पुजिएको श्रीयन्त्र पर्समा राख्दा पैसाको अभाव हुँदैन ।
निरुता भन्छिन्, ‘अब चाँडै फिल्ममा फर्किन्छु’
ढाड दुख्ने कारण र बच्ने उपाय यी हुन्
संकटबाट मुक्ति पाउनको लागी जप्नुस बौद्ध धर्मको यो मन्त्र